Yaadni Lakkuun Galma Hin Gahu! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooYaadni Lakkuun Galma Hin Gahu!
Yaadni Lakkuun Galma Hin Gahu!
Damee Boruu tin, Ebla 9, 2019
Akka nama tokkottis tahee, garee ykn ijaarsatti humni yaada lakkuun deemu galma isaa gahuu miti galmi isaa iyyuu maal akka tahe adda baafatee irrattti hojjechuuf rakkina guddaa qaba. Akka hattuu dukkanaa keessa deema. Hojiin isaa guddaan gufuu of jalaa kaasuu dha. Boochoo lamaan jidduu bishaan baatee deema. Hojiin isaa guddaan gama ibiddi qabate irraa dhaamsuu dha. Gurri isaa bakka hundaa dhageefataa jiraata. Akka waan dhaga’ee fi dubbate hojiin hin hiikneef akeekaa fi kaayyoo tokkicha ittiin bulu hin qabu.
Warri “Team Lammaa” jedhamu kun yaroo qabsoon Uuummata Oromoo muddee dhufu namoota uumaan colee tahanii warra EPRDF qaruuf of kenne turan. Yaroof afaan uummtaa dubbatanii ummata biraa tumsaa fi gargaarsa argatanii jiru. Ol’aantummaa TPLF of irraa kaasuuf warra Amhaara jala seenuun yaroo sanattti barbaachisaa tahuun ni mala. Malaamaltummaan aangoo qabachuun tufatamuu hin qabu. Garuu irbuu akeekaa fi kaayyoo mataa isaanii waan hin qabaanneef mila Habashaa jalatti akkuma kufan hafan.
Gaaffii uummataa deebsuuf akeeka ka’aniif keessa hin jiru. Namoota mana hidhaa jiran hiikuun fi qaama nagaa eegumsaa uummata daraarsaa ture diiguun filmaata hin qabu ture. Sana malee uummata dammaqee ka’e kana yoo sobaan qabaneessuuf hin yaalle wal fudhatanii baduu taaa’u. Sossobbii kanaan EPRDF wal qabatee kuffu irraa hafee jira. Ijaarsa TPLf ofirraa dhiibaa yaroo deeman aangoon itti urgaa’uu jlqabe. Jijjirama of keninee qabsoo keenyaan fidne jedhanii of jajuuf if of farsuu jalqaban. Dhiiga ilmaan Oromoo kumaataman itti haarsaa tahe tasa dagachuu eegalan.
Jijjirama fiduu miti haaroomsa lafa irratti argamuu danda’u tokko hin jiru. Kijiba irratti kijiba caalu dabalaa bulu. Akkuma kaleessa har’as Mootummaa EPRDFtu jira. Heeraa fi Seerri EPRDF hin xuqqamne. RIB EPRDF kan waggaa 28 uummata keenya fixaa turetu har’as itti jira. Har’a bakka Haayile Mariam Dasaleenyi bu’ee uummata keenya fixaa jiru Muumich Ministeeraa Kononeel Abiiyi tahuu qofatu adda godha.Kononeel Abiyi maqaa Oromoo aangoo haa qabatu malee nama xiyyaaraa fi kamikaalan Uuumata Oromoo fixxaa jiru akka tahe jiraatonni naanno waraanaa himachaa jiru. Bakka ol’aantummaan Tigray har’a RIB keessatti akka ol’aantummaan Amhaaraa dhalatee jiru wal nama hin gaafachiisu. Maqaa ABOn ADP fi NaMA RIB qabatanii Uummata Oromoo fixuu xiyyeefatanii jiru.
OPDOn jalqabaa kaafte yaada lakkuu akka qabaatu kan ishee godhee akeeka TPLF guutuuf ijaaramuu dha. OPDOn Abbayee Xaaye malee wal gahii mataa ishee godhachuuf eehama hin qabdu jedhamaa ture. OPDOn silaa jijjiramtee ODP taatee iedhamee ture. Har’as akkuma kaleessaa yaada lakkuun deemaa jirti. Wal gahii ODP immoo kan tuhatu warra Amhaara keessa Dammaqqee Mokonnon akka tahe namni hin hubanne jira natti fakkaatu. OPDOn yoomuu of dandeesse mataa isheen dhaabbachuuf dandeetti, haamilee fi onnee sabboonummaa hin qabdu. Uummata Oromoo maqaa Itoophiyyaan burjaajessitee qabsoo abbaa biyyuummaaf ilmaan isaa dhiiga kumaataman dhangalaasaniif gatii dhabsiisaa jirti.
Warri kaleessa yaroo Qeerroo fi Qarreen Oromoo waltajii itti akka bofaa sammuu gadi facafacamaa turan warri taa’aan caatii qaamaa itti kolfaa ture har’a OPDOn warraa injifannoo kana fidee jettee of fuula dura oofaa jirti. Haalli kun seenaa fi hawwaasa duratti waan abaramuu fi dura dhaabbatamuu qabu. OPDOn aangoo irra guyyaa lama buluuf jettee qabsoo ilmaan Oromoo oftultota Amhaaratti gurgurachaa jirti. Kijibdoonni OPDO dhaadannoo: “Oromoon nama jaalata! Oromoon nama ammata! Oromoo nama hundaa wajjin jiraachuu fedha! Biyyi Oromoo kan nama Itoophiyaa hundaa ti” jedhanii galgalaa ganama olola dharaa afuufudhaan Uummata Oromoo afaanfajeessaa jiru.
Karaa biraa oftuulmmaan Amhaaraa dagaagee of ijaaruudhaan magaalotaa fi biyya Oromoo kan keenya jedhanii falmuu irraa darbanii waraana Liyuu Haayiliin Oroomota Karrayyuu fi Waloo irratti duula bananii jiru. Warri yaada lakkuu kun uummata keenya irraa ittisaa hin jiran. Uummata Oromoo wajjin dhabbatanii gargaaruuf fedhi tokko ille akka hin qabane deddeebifnee aggarree jirra. Kana booda gaaffiin Uummata Oromoo maaloo nu gargaara kan jedhu miti. Kadhanaan keenya guddaan maaloo karaa irra nuuf maqaa dha. Akka gufuu diinaa fi uummata keenya jidduu teessanii gaaga’ama guddaa uummata keenya irraan hin gahiina jenna ifaa fi ifatti isaan gaafanna.
Sobduu tahuu isanii uummatni Itoophiyaa hunduu irratti dammaqaa jira. Afaaniin illee taatu mirgi Oromoo haa eegamu jechuun isaaniif cubuu dha. Akka Amhaara isaan irratti hin kaane waa’ee Itoophiyyaa malee waa’ee Oromoo dubbachuu ni sodaatu. Obbo Lammaa fi Kononeel Abiyi halkanii fi guyyaa itti haa shiminan waan Oromoo tahaniif qofa warra Habashaa biratti tufamaanaa jiru. Amma isaan faarsaa turan lafa irra isaan harkisaa jiru. Sababa kana irraa kana ka’e namootni Oromoo hojii jarra kana lamanii hin jaallanne illee har’a warra Habashaa irratti lolaa jiru.
Uummatni Oromoo har’as akkuma gaafa duraa sana obsaan isaan ilaala jira. Isaan waan gamnooman isaantti fakkaate warra Habshaa milatti kufanii araarfachuuf kadhachaa jiru. Obbo Lammaan irra deddeebi’ee amma iyyuu “Itoophiyyummaan Suusii dha”, jedha. Waan hubachuu qabu garuu biyya lafaa irratti “suusiin” (addiction) bifa kamiinuu dhukkuba waldhansa barbaadu akka tahe dha. Utuu dhukkuba kana fakkaatu qabu hojii uummataa guddaa gatittii isaatti baatee deemuu hin qabu.Akkuma nama araaraa qabnii hundaa mana waldhaansaa(Rehabilitation Center) seenee waldhaanamuu qaba.
OPDOn silmii dhiiga uummataa xuxxee jiraatu dha. Mee nama OPDO tahee harka guddaa ilaalaa. Hawwaasa keesaa jiraatan irraa adda. Madiin isaanii dhiita’ee garaan isaanii bobokokee erbee tokko mormatti hidhataanii yarroo deeman eenyu akka OPDO tahe adda baasuun nama hin rakkisu. Warri kun saamee nyaachuuf achi keessa gale malee waan biyyaa hojjechuu fi uummata tajaajiluun Sammuu isaanii keessa hin jiru. Warri kun kan biyya biraa irraa dhufan fakkaatu malee namoota Uummata Oromoo wajjin biyya Oromoo keessa jiraatan tasa hin fakkaatan. Warri kun dhuguma garaa isaanii waan jaalataniif keessa jiruu jechuun ni danda’ama. Nyaatanis galata baasaa jiru. Uummata Oromoos bilisa baafana jedhanii OPDO keessa waan galan hin fakkaatan. Kanaafuu yaadoo fi yaada isaan gadisiisu hin qaban.
Hooggantoon OPDO maqaa gara ODP jijjirachuuf dhiisuun gargaarumaa hin fidu. Sababni isaa waan jijjiruu danda’anii fi hawwan waan hin jirreef. Silaa kan isaan baasu bubbee qabsoo Bilisummaa Oromoo gara aangoo ol isaan baase irraa utaaluu hin qaban. Utuu tumsa Uummata Oromoo sana akka qabatanii ka’aniin itti fufanii jiraatanii qileensa miti bakkaan iyyuu achi irraa isaan hin kaasu. Humna uummata akka hin taanetti of harkaa baasanii gatan. Waan hunda caalaa uummata oromoo ni tufatan. Walaalummaa fi gowwumaa keessa deebii hin qabne hojjetan. Kana booda akkuma warra isaan duraa guyyaa tokko aangoo irraa ni darbamu. Xinnoo turuuf illee hundee hin qaban. Hunduu akka haaduu isaaniif qarachaa jiru arguu qabu.
Kana booda waan gochuu danda’amu yoo jiraatee:
Gara Uummata Oromoo deebi’anii akka uummatni ammantii isaan irrtti horatu gochuuf hojii uummatni lafa irrtti argu hojjechuu
Waraana WBO irrtti labsan hattattamaan dhaabanii karaa nagaa hiikaa siyaasaa barbaaduu irratti xiyyeefachuu
Ijaarsota Oromoo bobaa OPDO jala seenuudhaan rakkina uumman sooroma baasuu
Warra bifa kamiinuu uummata irratti yakka hojjetee jiru OPDO keessaa baasanii gara seeraa dhiyeessuu
Ijaarsonni Oromoo bilisummaa ijaarsaa qaban wajjin ODPn akka warra Amhaaraa adda tokko dhaabbuu irratti hojjechuun badii walii gala uummata keenya irra gahuuf deemu hin xiqqeessa taha.
Gaado Furra Has Been Peacefully And Successfully Finalised In Sidama Capital, Hawassa